Al-Shabaab oo shan qof oo safar ah ku dilay gobolka Bakool – Radio Muqdisho
Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa dilay shan qof oo rayid ah kaddib markii ay rasaas ku fureen gaari ay dad rayid ah saarnaayeen oo marayay gobolka Bakool.
Wararka ayaa sheegaya in gaari xamuul ah oo ka yimid gobollada woqooyi ay maleeshiyaadku ku risaasaayeen waddada isku xirta Hiiraan iyo Bakool.
Laba Haween ah ayaa ku jira dadka geeriyooday oo iminka lagu aasayo degaan lagu magacaabo Abal oo ka tirsan gobolka Bakool sida uu Radio Muqdisho u xaqiijiyay mid ka mid ah dadkii la socday gaariga la rasaaseeyay.
Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa gaariga rasaasta ku furay ka hor inta aysan u imaan, ayagoo kaddib baartay gaariga. Qof rakaabka ka mid ah ayaa sheegay in lacag ay ka qaateen maleeshiyaadku.
Kooxda Al-Shabaab ayaa horay xannibaad ugu hayay dadka ku nool gobolka Bakool, ayagoo diiday in gaadiidka xamuulka ahi ay galaan degaano badan oo ka mid ah gobolkaasi si ay raashin u gaarsiiyaan shacabka.
Maamulka Cadale oo ku baaqay in Daawo lala soo gaaro